Cele – Myanmar News
ယူခဲ့တာကျေးဇူးတင် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် မလေး ချမ်းချမ်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ သူမက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်း အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းချမ်းရဲ့ သမီးလေး မြမိုးဂင်္ဂါ လေးက ခုဆို ရင် ချစ်စရာကောင်းပြီး ခုဆိုရင် ၅နှစ် အရွယ် ရောက်နေပါပြီ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ချမ်းချမ်းက သူမကို အကောင့်တု …
ဖွေးဖွေး ဖွေးဖွေး ကားတိုက်ခံရပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းများထွက်ပေါ် ဒီနှစ် အကယ်ဒမီဇကာတင်စရင်းမှာလည်း ရေပန်းစားနေတဲ့ ရွှေမင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေးပါ။ ယနေ့ ပြန့်လွင့်လာတဲ့ သတင်းက စိတ်မကောင်းစရပါပဲ။ ဖွေဖွေး ၁ ယောက် ကားတိုက်ခံရပြီး ခါးခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှခဲ့သူဟာ ပရိုဂျူဆာ တင်ဝင်းထွန်း ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ …
လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်း
March 12, 2019 March 12, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်း ပန်းနုရောင် မင်းသမီးလေး သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေပါ ပရိတ်သတ်တို့ရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာပဲ တဖြည်းဖြည်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အကယ်ဒမီယွန်းယွန်း ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ အမူအရာ၊ ပိရိသေသပ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ဗီဒီယိုရော ရုပ်ရှင်တွေမှာပါ ကလေးဘဝကတည်းက ပါဝင် သရုပ်ခဲ့ရသူလေးပါ။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေတဲ့ အမူအရာရှလို့ ကလေးလူကြီး ချစ်ခြင်းခံရတဲ့ အနုပညာရှင်လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူ။ ဒီနေ့တော့ သူမရဲ့ လှသွေးကြွေနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ …
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်ဇနီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် ရွှေခေါင်းလောင်းနှင့်ရွှေစင် ၆ ကျပ်သား လှူဒါန်း
March 9, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
ရွှေစင် ၆ ကျပ်သား လှူဒါန်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်ဇနီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် ရွှေခေါင်းလောင်းနှင့်ရွှေစင် ၆ ကျပ်သား လှူဒါန်း ၉. ၃. ၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ် ——————————- ရန်ကုန်မြို့ လေးဆူဓာတ်ပုံရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရှိ ရခိုင်တန်ဆောင်းတွင် ရွှေခေါင်းလောင်းနှင့် ရွှေစင် (၆) ကျပ်သားရ်ှိ ရွှေစင် ရွှေသားကို …
သာသနာ့ဘောင် ဝင်ရောက်သွားတဲ့ Myanmar Idol Winner ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင်
ဖြိုးမြတ်အောင် “သာသနာ့ဘောင် ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်” ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီခရိုင် အုပ်ဖိုမြို့နယ် ဣစ္ဆာသယ ရန်ကင်းတော င် တောင်ညိုလေးတောရ အဂ္ဂဓူရဝိဇ္ဇာဓရ ဆရာတော် အသျှင်ကုသလ ၏ ခြေတော်ရင်း အစုံအား ဖူးမျှော်၍ Myanmar Idol Winner ဆုရှင် ကိုဖြိုးမြတ်အောင် မှ ရှင်သာမဏေ အဖြစ်ခံယူ၍ သာသနာဘောင်သို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီခင်ဗျာ ဒါယာကာ ဒါယာကာမများ …
သာသနာ့ဘောင် ဝင်ရောက်သွားတဲ့ မြန်မာ Idol Winner ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင်
March 9, 2019 March 9, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
Cele / Knowledge / News
မျက်ရည်လည်ရတယ် ကျော်မင်းဦး ရယ်။ အောင်သူကိုလည်း ပိုပြီး လေးစားသွားပြီ။ ပြန်လာစေချင်သေးတယ်ကွာ…
March 8, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
ကျော်မင်းဦး မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအသင်းကို ပထမဆုံး ဥရောပအဆင့်ပြိုင်ပွဲကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အသင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား ကျော်မင်းဦးကိုတော့ မှတ်မိကြဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘောလုံးသမားဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ အရပ်အမောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပျိုမေတွေ ဝန်းရံခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်မကောင်းစရာအနေနဲ့ ကျော်မင်းဦးကတော့ ခြေထောက်ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ဘောလုံးသမား ဘဝမှာ အပြီးတိုင် အနားယူလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုအနားယူပြီးနောက် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာတက်လာတဲ့ …
သမီး နာသွားလား တဲ့။ အေ မ မမြင်လောက်ဘူးထင်နေတာ အမေ မြင်သွားတယ်
March 8, 2019 March 8, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
သမီး ချယ်ရီ သမီး နာသွားလား တဲ့ အေ မ မမြင်လောက်ဘူးထင်နေတာ အမေ မြင်သွားတယ် အမေ နောက်လှည့်ကြည့် နေတာကို ကျွန်မ မမြင်လိုက်ပါဘူး ကျွန်မဟန်ပျက်ပြီးလဲကြသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘေးနားက လူအုပ်ကြီးက စိုးရိမ် စိတ်တွေ နဲ့  ဝိုင်း အော်ကြတာလေ သမီး ချယ်ရီ ခဏ နားလိုက်ပါလား သမီး ရလားတဲ့ …
သိန်း ၁၀၀ နီးပါးတန်တဲ့ ရွှေအခေါက်၊ ဒေါ်လာတွေ နဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကောက်ရတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးရဲ့ လေးစားအတုယူဖွယ် လုပ်ရပ်
သိန်း ၁၀၀ သိန်း ၁၀၀ နီးပါးတန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကောက်ရတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးရဲ့ လေးစားအတုယူဖွယ် လုပ်ရပ် ဒီပို့ကို တွေ့မြင်သူတိုင်း ကျိန်းသေ ရှယ်လုပ်ပြီး မျှဝေပေးသွားမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်စွာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတိုင်းကလည်း အတုယူသင့်တဲ့ လုပ်ရပ်လေးပါ..။ ဒေါ်လာတွေ ၊ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေ၊ လက်တော့ နဲ့ ဖုန်းအပါအ၀င် ခန့်မှန်းချေ သိန်း ၁၀၀ နီးပါး …
ယုဇန ဥယျာဉ်မြို့တော်က နှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု တရားခံ မိပြီ
March 7, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
နှစ်လောင်းပြိုင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် နှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား (၂၄)နာရီအတွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ ရန်ကုန်၊ မတ် ၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ အေ(၉)လမ်း၊ တိုက် (၅/၂၀၄)ရှိ ဧည့်ခန်းအတွင်း၌ မွေ့ရာဆိုင်အရောင်းဝန်ထမ်း များဖြစ်သောဟိန်းမင်းအောင်၊ (၂၇) နှစ်မှာ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများဖြင့် လည်းကောင်း၊ မမြင့်မြင့်ဝင်း၊ (၂၃)နှစ်မှာ ကုတင်ပေါ်၌ ရင်ညွန့်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ (၁)ချက်ဖြင့်လည်းကောင်း သေဆုံးမှု နှင့် …